Qditor: Isihleli Sevidiyo Samadivayisi weWindows kanye Namaselula | Izindaba zamagajethi
I-Qditor: Isihleli Sevidiyo se-Windows, Android ne-iOS
Umbulali Uviniga | | Android, AmaSelula, Software, Windows
Abantu abaningi bayazibuza ukuthi kungani uhlobo oluthile lwesicelo olungasisiza hlela amavidiyo ngobuchwepheshe kumadivayisi eselula, isimo esingaqondakali ukuthi akekho ongaasiqonda uma isizukulwane esisha sazo, sesivele sifaka ama-processor anamandla amakhulu nenani elikhulu le-RAM.
Mhlawumbe incazelo itholakala ngosayizi wesikrini ithebhulethi (i-Android noma i-iPad) engaba nayo, ngoba ukuze ukwazi ukuba nenkululeko enkulu yokusebenza kuhlala kudingeka isikrini esikhudlwana, njengaleso esinikezwa ngamakhompyutha wakho siqu. Sithole uhlelo oluthandekayo ongalusebenzisa kuWindows (ngaphansi kwendlela yokukhokha) futhi, kumadivayisi eselula e-Android noma we-iOS, eyokugcina ingenye yezinto ezinhle kakhulu njengoba inguqulo yayo imahhala ngokuphelele.
1 Ungayisebenzisa kanjani i-Qditor enguqulweni yayo ye-Windows
2 Isebenza kanjani i-Qditor kumadivayisi eselula
Ungayisebenzisa kanjani i-Qditor enguqulweni yayo ye-Windows
Njengoba sishilo esigabeni esedlule, lolu hlelo lokusebenza lokuhlela amavidiyo abizwa nge- "Qditor" lwethulwa ngaphansi kwezindlela ezimbili ezihlukile, okuwukuthi, ongakwazi ukufaka kwikhompyutha yakho siqu yeWindows nenye ongayisebenzisa kumadivayisi eselula anohlelo lokusebenza oluhambisanayo. Ukukhuluma okokuqala ngohlobo lweWindows, mhlawumbe lena enye indlela ephelele kunazo zonke esiyitholile, enenani elingabizi kakhulu maqondana nezinye izinhlelo zokusebenza ezinokusebenza okufanayo futhi ezivela esandleni samafemu abalulekile (njenge I-Adobe Premiere o Cut final). Intengo okuzodingeka uyikhokhele ilayisense yokusebenzisa leli thuluzi icishe ibe ngama- $ 20 ngokuya ngengosi yayo esemthethweni.
Izinzuzo zokusebenzisa le nguqulo ziningi, zikwazi ukusho okokuqalaku-interface enobungane enayo. Uma usuvele usebenzise olunye uhlelo lokusebenza ukuhlela amavidiyo (njengalawo esiwakhulume ngenhla) ngokuqinisekile uzolithanda leli thuluzi, ngoba ngalo uzobe usabe kahle kahle izinkambu lapho izinto zokusebenza zizotholakala khona.
Engxenyeni engenhla unezifunda ezimbili ezisatshalaliswe kahle, esisodwa esingakwesokunxele zizoba kuphi izithombe zethu, amavidiyo, amafayela alalelwayo (umsindo wangemuva, umculo, izimemezelo, imisindo nokunye okuningi) phakathi kwabanye abambalwa. Ngasohlangothini lwesokunene esikhundleni salokho uzoba nokubuka kuqala kwanoma ikuphi ukukhetha okwenzayo endaweni eyedlule. Lapha futhi unethuba lokusebenzisa ukuthwebula kwedivayisi yakho, okungaba yikhamera yenkomfa yevidiyo noma ikhamera edijithali exhunywe kudivayisi efakwe nakukhompyutha yakho.
Ngezansi kunendawo lapho konke okuzokwenzeka khona, ngoba iziteshi ezimbalwa zokuhlela zisatshalaliswa kahle lapho. Ngakho-ke, kuzofanele ukhethe lezo zinto ukusuka phezulu ukuze uzihudulele phansi ukuze uzithole, endaweni okungeyazo. Lapho ungakhona hlanganisa inani elihlukile lamavidiyo, imisindo kanye nemibhalo njengezihloko. Ngokusho konjiniyela we- "Qditor", lolu hlelo lokusebenza lungangenisa futhi luhlele amafayela evidiyo ngesinqumo esingu-1080p.
Isebenza kanjani i-Qditor kumadivayisi eselula
Uma unedivayisi yeselula ye-Android noma i-iPad unenhlanhla, ngoba unjiniyela uthathe isinqumo nikela leli thuluzi lokuhlela ividiyo mahhala ngokuphelele kulawo ma-terminals. Lapha futhi sithola izinzuzo ezimbalwa okufanele sizisebenzise noma kunjalo, kufanele kucace ukuthi kuzoba nemikhawulo embalwa emisebenzini yayo ngenxa yezinsizakusebenza ezitholakala kumaqembu osayizi omncane kunalezo ezinikezwa yikhompyutha yomuntu siqu.
Izinzuzo zokusebenzisa isihleli sevidiyo ku-iPad noma kuthebhulethi ye-Android zinkulu, ngoba umsebenzisi kufanele aqale ukuthwebula noma iyiphi ividiyo ngekhamera yakhe futhi kamuva, enze izinguquko ezithile, okuthile okungabandakanya ukusikwa kwevidiyo, ukusetshenziswa kweminye imiphumela, ukuhlanganiswa kwezihloko, imisindo engemuva phakathi kwezinye izici ezimbalwa. Lapho ividiyo isiqedile ingathunyelwa kalula ku-YouTube uma sinesiteshi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » I-Qditor: Isihleli Sevidiyo se-Windows, Android ne-iOS
Yini ukushaya kwe-Wi-Fi?
Umphathi Womsebenzi ku-Chrome: Ubuwazi ukuthi ikhona?